Musharax Jabriil oo Kulan Furan oo Su'aalo lagu Weydiinayay u Qabtay Dadweynaha Garowe (SAWIRO)
admin Oct. 8, 2016, 3:56 p.m. 135
Musharaxa Madaxweyne Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa kulan furan Garowe kula qaatay dadweyne isugu jira aqoonyahanada, waxgaradka, siyaasiyiinta, haweenka iyo dhalinyarada ku sugan magaalada Garowe ee Caasimada Maamulka Puntland.
Kulankan ayaa Musharax Jibriil waxaa uu ugu horeyn uga xog-waramay marxalada kala guurka ah ee uu dalka galay iyo sida loogu baahan yahay in Soomaaliya ay hesho is bedel horseeda in dalka oo dhan la gaarsiiyo dowladnimo iyo horumar waarta.
Musharax Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa sheegay in dowladda hada jirta ay ku guuldareysatay afartii sano waxyaabihii loo igmaday, isla markaana ka gaabiyeen in dalka la gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod.
Waxaa uu ka hadlay arrimaha ammaanka, garsoorka, musuq maasuq iyo dib u heshiisiinta, isagoo xusay in dowladda ku fashilantay inay arrimahaas wax ka qabato.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad jecel dowladnimada, balse ay la heystayaal u noqdeen koox yar oo talada dalka isku koobtay.
Waxaa uu sheegay in laga gaabiyay dib u heshiisiinta iyo in la soo celiyo kalsoonidii iyo is-aaminadii shacabka Soomaaliyeed, waxaa uu balan qaaday in hadii xilka ku guuleysto uu ahmiyad koowaad siinayo dib u heshiisiinta.
Qaar ka mid ah dadkii ka qeyb galay kulanka ayaa weydiiyay arrimaha dib u heshiisiinta, isu keenida dadka Soomaaliyeed ee cuqdada kala qaba, arrimaha amniga, siyaasada iyo dhalinyarada.
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay Odayaasha dhaqanka inay soo xulaan xildhibaano dalka ka saari kara marxalada adag, isagoo ka digay in musuq maasuq iyo nin jecleysi.